BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Ganacsato Turkish oo maalgalinaya Soomaaliya
Ganacsato Turkish oo maalgalinaya Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Abriil, 2012, 20:23 GMT 23:23 SGA
Waxaa Muqdisho yimid wafdi ganacsato Turkish ah oo u yimid si ay maalgashi uga sameeyaan Somaliya. Waxay la kulmayaan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida.
Wariyaha BBCda Maxamed Maxmud Dhoore ayaa warbixin ka soo diray.
Hayadda Africa Enterprise challenge fund ayaa mashrruuc ka hirgalinayso Somaaliya bishan shan iyo tobankeeda.
Mashruucan oo socon doono saddex sanno ayaa waxaa maalgaliyay waddamada deeqaha bixiya waxaana lagu maalgalinayaa ganacsiga gaarka loo leeyahay ee warshadaha qudaarta, beeralayda, ganacsatada xoolaha, kaluumaysatada iyo shirkadaha bixiya amaahda yaryar.
Mashruucan waxaa maamulaya shirkada caalamiga ee KPMG waxayna ganacsatada la siin doonaa deeqo dhan 250 kun oo dollar ilaa hal milyan iyo bar.
Maxamuud maxamed Salaat waa la taliye sare shirkada caalamiga ee KPMG waxaan ka waraysanay sida deeqaha loo siin doono ganacsatada.
Dayactirka garoonada Hargaysa iyo Berbera
Garoonada dayuuradaha ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa laba sharikadood ku guuleysteen dib u dhis iyo casriyeyn inay ku sameeyaan. Waxaa lagu dhisayaa toban million oo dollar oo dawladda kuwait ay ku deeqday.
Qalabka boorsooyinka ama shandadaha lagu baaro ayaa la dhigay garoonka diyaaradaha ee Hargaysa toddobaadkan.